4 Tabobaro Route Views Si Dhig Shiine Instagram | Save A tareenka
Home > safarka Europe > 4 Tabobaro Route Views Si Dhig Shiine Instagram
Ku safrid tareen waa raaxo, bay'adda iyo waxa uu siiyaa cajiib ah views, fiican ee samaynta aad Instagram badan prettier. halkan waxaa ku qoran 4 views wadada tareenka si aad u dhalaalay account Instagram.
wadada tareenka u arka No.1 – West Highland Line, Scotland
Scotland famously uu leeyahay qaar ka mid ah kuwa ugu quruxda badan Bbc iyo tababar views wadada dunida oo dhan. Tani safarka tareenka waxay bixisaa views ballaaran moors fog, lochs, iyo buuraha. Marka safraya on Highland Line West ah, aad u yeelan doontaa nasiib ku filan in waayo-aragnimo halyeeyga Glenfiddich Viaduct. fiiri yaqaan? Taasi waa sababtoo ah waxaa la ciyaaray sida Express Hogwarts ee Harry Potter movie taaso. Imagine the double-taps those views will get.
sitoos Express, Switzerland
Haddii aad jeceshahay a views wadada tareenka xawaaraha gaabis ah, tani waa wadada adiga iyo kuwa raacsan Instagram waayo,. Your view dusha sitaa bilaabi doonaan iyada oo leh muuqaal Matterhorn ku socdeen. From Zermatt, aad ka dhigi doonaa toddoba saac safarka tareenka weheliyaan UNESCO wadada World Heritage Site in St Moritz. Ku raaxayso xigtay ee photos sida ammaanta Alpine aragtida vistas dariishadaada gudub.
Flam Railway The, Norway
Safarka A gaaban – this hal saac tareenku ka Myrdal in Flam waa xaq, waayo, fikradaha. Oo wixii aad ku raacsan Insta nasiib mahadsanid doonaa. Waxaad arki doonaa Nali ah tunnel, iftiinka Kjosfossen biyo mareen, iyo gacamo aad qurux badan oo ah Norway.
Xulashadayaga xiritaanka aragtida wadada tareenka – Inlandsbanan, Sweden
Haddii sitoos Express ma uu baraf ku filan iyo baraf aad for, markaas waa inaad u jeclaataa doonaa Line Inland ah. Tani waxay 14-saac u quudhin tareen bilaabmaa Kristinehamn ka hor inta ay dhex marayay dhul waxashnimo Scandinavian dhinaca Gällivare. Out of daaqadda, aad arki doonaa Circle Arctic iyo – haddii aad indhaha aad u foojignaadaan – qaar ka mid ah duur-joogta ee foomka of Deerada, faras duur, iyo elg.
Haddaba sidaas daraaddeed ka dib waxa aad baratay views wadada tareenka iyo waa Ready in ay tagaan on kortaan beddelaya nolosha tareenka inta aad turxaan xisaab Instagram iyo helaan qaar ka mid ah kuwa raacsan cusub? Ballansan aad safar tareen riyo maanta Save A tareenka. Oo waliba waad hubin kartaa koontadayada 'Instagram' instagram.com/saveatrain
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog gal goobta, ka dibna riix halkan: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/4-train-route-views-to-make-your-instagram-account-shine/ - (hoos u riixdaa si aad u aragto Code Cudarada ah)
#Scotland Instagram sweden tareen safarka safarka safar waddo travelswitzerland